कपाल नबढेर तनावमा हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यस्तो घरेलु उपाय - Khabar Break
कपाल नबढेर तनावमा हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यस्तो घरेलु उपाय
हरेक महिलालाई कालो, लामो र स्वस्थ कपाल बनाउन रहर हुन्छ। तर विभिन्न कारणले कपाल लामो र कालो बनाउन सम्भव हुदैन। अहिलेको आधुनिक समयमा आधुनिक प्रविधिले कपाल लामो बनाउन सकिन्छ तर यो त्यति फलदायी हुदैन।
कपाल टुक्रिने, झर्ने, हाँगा पलाउने, कपाल लामो नहुने आदि समस्या हुनेगर्छ। यस्तै समस्याबाट महिला र पुरुष दुवै पिडित छन्। यदि तपाईहरु पनि आफ्नो कपाल कालो, लामो र स्वस्थ बनाउन चाहानुहुन्छ भने ती उपाय घरमै अपनाउन सकिन्छ ।
१. सुद्ध तोरीको तिल – घरमा भएको सुद्ध तोरीको तेल प्रयोग गर्दा कपाल लामो र कालो हुने गर्छ। हप्ताको २ चोटी कपाल नुहाउनु अगाडी तेलको प्रयोग गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। यसले कपाल झर्नबाट र लामो कपाल बनाउनमा धेरै सहयोग गर्छ ।
२. पत्ता मेहेंदी – घरमै उपलब्ध हुने पत्ता मेहेंदीलाई मसिनो गरी पिसेर प्रयोग गर्दा कपाल मुलायम हुनुको साथै कपाल चम्किलो पनि हुन्छ। पत्ता मेहेंदी १५ १५ दिनमा प्रयोग गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।
३. मेथी – मेथी हाम्रो घरमा सजिलै उपलब्ध हुने चीज हो। मेथीले कपाललाई स्वस्थ राख्न पनि सहयोग पुर्याउछ । मेथी प्रयोग गर्ने विधि अरु भन्दा बेग्लै हुने गर्दछ। यसलाई सुरुमा २ रात देखि ३ रातसम्म पानिमा भिजाएर फुल्न दिनुपर्दछ। भिजेपछी मेथीलाई मसिनो परेर सेलौटामा पिसेर कपालको जरामा लगाउनु पर्दछ। कपाल २ घन्टासम्म मेथीलाई सुक्न दिनुपर्दछ र सुकेपछि चिसो पानिले कपाललाई पखाल्नु पर्दछ। यसो गर्दा कपाललाई भिटामिन सी साथै मुलायम बनाउन सहयोग पुग्छ ।
४. प्याजको रस – प्याजको रसले पनि हाम्रो कपाल बाक्लो बनाउनुको साथै मोटो पनि बनाउछ। प्याजलाई मसिनो गरी काटेर मिक्सचरमा पिस्ने र रस लगाउनु कपालमा लगाउनु पर्दछ। यसलाई १ महिनामा एकचोटी प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ।
५. अदुवाको रस – अदुवाको रसले पनि प्याजको रसको जस्तै काम गर्छ । यसले कपाल मोटो बनाउनुको साथै कपालको वजन बढाउने गर्दछ। अदुवालाई मसिनो परेर मिकसरमा पिसेर,रस प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो महिनामा १ चोटी प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।
६. अन्डा – अन्डा कपालमा लगाउदा धेरै फाइदा गर्छ। कपालमा अन्डाको सेतो भाग लगाउनु पर्दछ। अन्डा कपालमा लगाएपछि सुक्नदिनु पर्दछ र पछि चिसो सफा पानिले पखाल्नुपर्दछ।